फागुनभित्रै नयाँ पेट्रोलपम्प सञ्चालनको स्वीकृति, कता कता खुल्दैछन् ? - Aarthiknews
सोमबार, २४ चैत्र २०७६ Monday, 06 April, 2020
# प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय
फागुनभित्रै नयाँ पेट्रोलपम्प सञ्चालनको स्वीकृति, कता कता खुल्दैछन् ?
काठमाडौं । नयाँ पेट्रोलपम्प सञ्चालनको स्वीकृति फागुन महिनाभित्रै दिइने तयारी छ । दस महिनाअघि आवदेन लिएको नेपाल आयल निगमले प्रक्रियागत छानबिन अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । निगमको छानबिन समितिले मापदण्डअनुसारका निवेदनको पहिचान गरिसकेको प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए ।
निगमले फाुगनभित्रै नयाँ पम्पको स्वीकृत दिने तयारी गरेको छ । प्रवक्ता गोइत भन्नुहुन्छ, “हामीले छानबिन गरेर कार्यकारी निर्देशककोमा पठाएका छौँ, अब अन्तिम प्रक्रियामा छ, मापदण्ड पूरा गरेका र आवश्यकता रहेका स्थानमा सबैले स्वीकृत पाउने छन् ।”
नयाँ पम्पका लागि एक हजार २५ व्यवसायीले आवेदन दिएका थिए । निगमले विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका र ठूला तथा साना सहरोन्मुख क्षेत्रका लागि गत वैशाखमा आवेदन खुलाएका थियो । त्यसमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ बाट ३४३ वटा आवेदन परेका छन् ।
सबैभन्दा थोरै कर्णाली प्रदेशबाट २२ वटा मात्र छन् । त्यस्तै प्रदेश १ बाट १८९, बाग्मती प्रदेशबाट १३१, गण्डकीबाट २७, प्रदेश ५ बाट दुई सय र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ५६ वटा आवेदन परेका छन् ।
अब नेपाली क्वारेन्टाइन पनि डब्बुएचओको मापदण्ड अनुसार
लकडाउनले बेरोजगार बनेकालाई राहत
लकडाउनको अवधिमै २९ करोडभन्दा बढी भन्सार सङ्कलन
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्धारा बजेट रोक्का
त्रिशक्ति क्लबले ११५ परिवारलाई बाड्यो राहत
माथिल्लो तामाकोशीको निर्माण जारी राख्न, इन्धन र निर्माण सामग्री आयातमा समस्या
भक्तपुरमा परिसंघको सहयोग
विदेशमा रहेका विद्यार्थीका लागि एक हजार डलर पठाउन माग
लकडाउन लगत्तै सुजुकीको चेकअप क्याम्प
'महामारीले विश्वभरको वित्तीय क्षेत्रको ‘इकोसिस्टम’मा नै प्रभाव पारिरहेको छ'
शिवमद्धारा ३ सय ८० परिवारलाई खाद्यान्य वितरण
अमेरिकी राष्ट्रपति बल्ल गले, भातरतसँग पनि सहयोग मागे
संक्रमणबारेका २५ फिल्म जुन लकडाउनमा अत्याधिक हेरियो
के हट्दैछ त भारतमा लकडाउन ?
चीनको नीति “एक हातले संक्रमणसँग जुध्ने र अर्को हातले आर्थिक विकास गर्ने”
चीनले अमेरिकालाई दियो एक हजार भेन्टिलेटर
बलिउड गायिका कनिका कपुरको छैटौँ रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’